Maalinta caalamiga ee Af-ka hooyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maalinta caalamiga ee Af-ka hooyo
Publicerat torsdag 21 februari 2008 kl 16.17
Bare Axmed Ibraahim oo xisad maalintii Arbacada ugu dhigayey dhallaan soomaaliyeed ee dhigata mid ka mid ah dugsiyada sare ee Istockholm. Isagoona ka hadlayey taariikhda maalinta 21-ka Feebraayo ee adduunweynaha looga dabaaldego loona aqoonsadey xuska maalinta luuqadda hooyo iyo sida ey ku timid. Iyadoona dabaaldegga maalintaa bilaabatey sannadkii 1999-kii. Iyo heestii macaneyd ee fannaanaddii Maryan Mursal ee ”soomaali u diida ceeyb”.
Warbixin laga ogaadey heyadda iskuulaadka ee skolverket, ayey ku caddeyd in degmooyin badani aaney gudan waajibaadkii ka saarnaa xuquuqda ey dhallaanka asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa u leeyihiin barashada luuqaddooda hooyo.
Middaasina oo ey heyaddu dhaliisha ugu ballaaran u soo jeedisey siyaasiyiinta ka howlgala degmooyinka oo la sheegey in aaney aqoon ballaaran u laheyn waxbarashada luuqadda hooyo ee dhallaanka.
Olof Norstedt, wuxuu madax ka yahey waaxda dhaqamadda kala duwan ee degmada Eskilstuna. Halkaasina oo ey ka jiraan howlo lagu guuldarreystey ee la xiriira barashada luuqadda hooyo.
- Midda ugu muhiimsan waxey tahey in aan helo shaqaale hoowshan uga soo bixi kara hab-sami, ee maaha oo keliya inaan shaqaaleyno cid ku hadasha luuqadda dhallaanka oo keliya.
Waa inaan macallimiinta noocaasiya ugaarsanno sidii aan ku hantiyi laheyn. Sida uu sheegey Olof Norstedt.
Degmooyinka qaar badan ayaan hoowshaa uga soo bixin sidii looga baahnaa, xitaa haddii heyadda iskuulaadku ey kormeero ku kala bixisey marar dhowr ah, una bayaanisey meelaha ey iimuhu ka jiraan, sida uu sheegey Alf Johansson, oo ah sharciyaqaan ka howlgala heyaddaa.
Degmooyinka illaa iyo hadda ey macallimiinta luuqadda hooyo sheegeen iney xaaladdoodu sidii hore ka wanaagsan tahey xitaa haddii aa la garan karin sida berito xaaladi noqon doonto, waxaa ka howlgala Axmed Ibraahim, ahna Bare soomaaliyeed ee muddo toddoba sannadood gaareysa ku howlanaa, siduu dhallaanka ugu dhiirigelin lahaa barashada luuqaddooda hooyo.
Heyadda iskuulaadka ee Skolverket, oo kormeero ku sameysey degmooyin gaareya 168, ayey qiyaastii 53% u soo jeedisey dhalleeceyn in aaney dhallaanku helin xuquuqdoodii waxbarashada ee luuqadda hooyo iyo weliba taageerada maadooyinka kuwooda u baahan in afkooda loogu sharraxo, waxa loo yaqaan studie handledning.
Heyadda ayaa dhowaantan ka fileysa amar wasiirka waxbarashada iney baaritaan ku sameeyaan haddey suurtagal tahey in dhallaanka loogu dhigi karo luuqaddooda hooyo iyada oo la adeegsaneyo aaladda internetka ee distansundervisning. Waa marka ey macallinka iyo ardeygu aaney is horjoogin.
- Dhowaantan ayey heyadda iskuulaadku fileysaa iney ka hesho wasaaradda waxbarashada wareegto la xiriirta in heyaddu baaritaan ku sameyso waxbarasahada la adeegsado aaladda internetka, qaasatan marka laga hadleyo barashada luuqadaha, sida uu sheegey Alf Johansson.
Qorshahaa ayey siyaabo kala duwan fikirro uga muujiyeen qaar ka mid ah macallimiin dhigta luuqadda hooyo iyo siyaasiyiin.
Aan ugu soo hormariyo Nebil Hagi, ahna macallin dhiga luuqadda Kurdiga iyo xisaabta.
- Waxbarashada luuqadda hooyo maaha oo keliya in luuqad la baro dhallaanka, waxaa iyaguna ku lammaanan dhaqanka iyo sooyaalka. Waa in la eegaa sida ardeyda qudhoodu isula qabsan karaan.
Sidaa daraadeed ilama aha in ey wanaagsannaan laheyd waxbarasho noocaasiya.
Axmed Ibraahim ayaa isaguna middaa ka eegey dhan kale. Wuxuuna Axmed qabaa in taasi ka wanaagsannaan laheyd wax la’aan.
Rossana Dinamarca, oo baarlamanka xubin uga ah xisbiga Bidixda ee Vänster partiet, islamarkaana afhayeenka xisbiga ee siyaasadda waxbarashada, ayaa iyadu qabta iney xal u noqon laheyd sida Axmedba sheegey dhallaanka qaarkood ee aaney suurtagal u aheyn iney helaan macallin ka kaafiya barashada luuqadda hooyo, hase yeeshee aan middaa loo qaadan xal joogto ah ee waara.
Waxey gabadhaasi qabtaa in ardeydu xaq u leeyihiin maadadan, islamarkaana ey helaan macallin ka kaafisa.
Maalinta caalamiga ee luuqadda hooyo